Waatan Kooxda Uu Cristiano Ronaldo Qalbiga Gashaday Ee Uu Doonayay Inuu Ku Biiro & Go'aankiisa Kama Dambaysta Ah - Gool24.Net
Waatan Kooxda Uu Cristiano Ronaldo Qalbiga Gashaday Ee Uu Doonayay Inuu Ku Biiro & Go’aankiisa Kama Dambaysta Ah
August 4, 2020 Apdihakem Omer Adam
Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo warramayaa inuu bixitaan ku fikiray kahor intii aan kubadda cagtu mudada ku dhaw afarta bilood hakadka u gelin xanuunka saf-marka ah ee Korona.
Ronaldo ayaa aad u xiisaynaya caana ku ah inuu naftiisa loolan ku geliyo horyaalo kala duwan waana sidii uu sameeyay laba sano kahor markii uu ka dhaqaajiyay Real Madrid una wareegay dhinaca Juventus.
Sida uu sheegayo France Football, Ronaldo ayaa ka fikirayay aragtida ah inuu u dhaqaaqo kooxda Paris Saint-Germain xilli ay sidoo kale soo jiidasho leedahay inuu weerar kala ciyaaro xiddigaha kooxdaas ee Neymar JR iyo Kylian Mbappe.
France Football ayaa sheegaysa in Ronaldo aysan farxad la’aani ku haynin Juventus balse sidoo kalena uusan farxad ku haysan oo bixitaan uu kaga tago Juventus ay ahayd mid macquul ah.
Dhinaca kale PSG ayaan la filayn inay wax dalab ah ka gudbiso Cristiano Ronaldo xagaagan maadaama oo ay jirto dhaqaale xumo uu keenay caabuqa Korona oo aan wax saxeexyo ah oo waaweyn si sahlan loo samayn karin.
Warbixinta ayaa intaas ku daraysa in go’doonkii dunidu gashay uu xanibay wadahadalii uu Ronaldo la yeelan lahaa Paris Saint-Germain taasina ay ka dhigan tahay in go’aankiisa haddu uu yahay inuu sii joogo magaalada Turin.
Warbixintan kasoo baxday majalada ree France ayaa ah mid soo baxaysa maalmo kooban kahor kulanka ay Juventus la yeelan doonto kooxda Lyon ee UEFA Champions League ka tirsan xilli lugtii hore ay Lyon 1-0 kusoo guuleysatay.